सिसाखानीमा पहिरोलो पुल बगायो , मोटरबाटो क्षतबिक्षत, सकसपुूर्ण यात्रा गर्न बाध्य ! – ebaglung.com
सिसाखानीमा पहिरोलो पुल बगायो , मोटरबाटो क्षतबिक्षत, सकसपुूर्ण यात्रा गर्न बाध्य !
२०७६ श्रावण १४, मंगलवार २१:४७	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
हेम विश्वकर्मा, बडिगाड २०७६ साउन १४ । बडिगाड गाउँपालिका वडा नं २ र ३ को सिमानामा पर्ने जोर्ति खोलाको पुल पहिरोले बगाएपछि स्थानियले काठको पुल (फड्के) निर्माण गरेका छन् ।
गत साउन ८ गते अबिरल बर्षा सँगै माथि बाट खसेको पहिरोले पुल बगाएको थियो । पहिरोले पुल बगाएसँगै सो ठाउँमा जोखिम बढेकाले तत्कालका लागि स्थानियले काठको पुल निर्माण गरेका हुन् । मोटबाटोबाट लाभाम्बित हुन नसकेका सिसाखानी तल्लो भेगका स्थानियले बजार आवतजावत गर्नका लागि यहि बाटो प्रयोग गर्दै आएका छन् । उता माथिल्लो भेगमा मोटरबाटो पुगेतापनि बर्खा लागैसँगै दर्जनौँ ठाउँमा पहिरो गएकाले हिउँद नलागुञ्जेलसम्म सवारीसाधन आउने सम्भावना नरहेको स्थानिय तारा थापाले बताए ।
बर्षात सुरुभएसँगै सिसाखानीका अधिकांस स्थानियले आउजाउ गर्ने यो ब्यस्त बाटोमा यतिबेला जोखिम बढेको र यसको समाधानकालागि कहिँकतैबाट आश्वासन नआएको स्थानिय गोपीराम काउचाले बताए । यस सम्बन्धमा सोही वडाका वडा अध्यक्ष खड्क पुन सँग बुझ्दा उहाँले स्थानियको सक्रियताप्रति आभार प्रकट गर्दै बिपत्तिले पु¥याएको क्षेतिप्रति वडाले समाधान खोज्ने बताए ।
सिसाखानी मै बिभिन्न समयमा परेको बर्षाले वडा कार्यलयमाथिबाट खसेको पहिरोले कोठाभित्र भल समेत छिर्ने गरेको छ । ठुलो पानि पर्दा कार्यलयका ३ वटा कोठामा पानि पसेर जलमग्न हुने गरेको कार्यालय सहयोगी समिर पुनले जानकारी दिए ।
बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रक्त सन्चार केन्द्रको आवश्यकता ! धन्य हुन् ती स्वास्थ्यकर्मीहरु. जस्ले आफ्नै रगत दिएर बिरामी बचाउदै आएका छन् !
खेतमा पानी लगाउने बिषयमा झै-झगडा हुँदा छिमेकीको हत्या !